ဆောင်းတွင်းလအတွင်းတိုက်ကြီး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ. မိုးပွင့်, နှင်းနှင့်ခဲသောအပူချိန် ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုစေနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ် ယာဉ်မောင်းသွားလာရန်အဘို့အ လမ်းများ. ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ကားဖြင့်ခရီးသွားလာချမ်းရာသီဥတုနှင့်ရေခဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီး braving ဆိုလိုတယ်. အဆိုပါလမ်းများချောများမှာ, နှင့်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ် ဘတ်စ်ကား ထိန်းချုပ်မှုထဲကလျှောစေခြင်းငှါ.
မည်သို့ပင်အဆိုပါ dreary ၏, အေးစိမ့်သောရာသီဥတု, ပဲရစ်အိပ်မက်ဖြစ်နေဆဲ ဦးတည်ရာကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး. ပဲရစ်ရုံကြောင့်အေးသောရာသီဥတု၏ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှသောသူတို့အပျေါထှကျလက်လွတ်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်. သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည် ဆောင်းတွင်းကာလ၌ပဲရစ် အဘယ်ကြောင့်မီးရထားခရီးသွားလာအဲဒီမှာ get ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်:
သငျသညျပဲရစ်မှရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျမီးရထားခရီးသွားလာပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် အငြိမ့်များနှင့်အဆင်ပြေ. သငျသညျဥရောပတှငျနထေိုငျခဲ့လျှင်သို့မဟုတ် ဥရောပမြို့ကနေပဲရစ်ခေါင်းနှစ်လုံး, မျိုးစုံ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား နေ့ရက်တိုင်း၌၎င်း, ပဲရစ်မြို့မှထွက်သွား. အောက်ပါစာရင်းထဲမှာသင်ရရှိနိုင်သောအများအပြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားတဦးကိုရွေးချယ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုဥရောပရဲ့ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများအချို့ထံမှပဲရစ်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာပြသ:
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-winter-paris/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)